I-Rustenberg kunye Nendawo Ezinomtsalane Ezingqongileyo
I-Rustenberg ekwiphondo lase North West, eMzantsi Afrika, ikufuphi eJohannesburg nase Pretoria. I-Rustenburg yindawo yolonwabo, ikufuphi eSun City Resort. Esisixeko sineyona mayini enkulu ye Platinum kumhlaba jikelele. Inendawo entle kunye nenkcubeko yesintu.
I-Rustenberg, Kwiphondo lase North West, eMzantsi Afrika
Indawo iRustenburg ikumandla we North West ye Johannesburg, kwinyawo ze ntaba iMagaliesberg kum-mandla ongenayo imalaria. Yenye yedolophu ezindala kwaye ezinomtsalane kulom-mandla ngamanye amaxesha yaziwa njenge Sixeko se Platinum.
Esisixeko sikwiphondo lase North West siyindawo yokubaleka abahlali base Goli abadiniweyo, sele kuyiminyaka ngoku. Yiyure kuphela ukusingisa kulendawo. Iindwendwe zingonwabela ukuzula eRustenburg enenani lendawo zemifanekiso eyenziwe ngesandla, izitendi zase fama kunye nendawo zokutya endleleni. Indawo iWaterfall Mall yeyona ndawo yokuthenga eRustenberg.
Zininzi iindawo ezibukwayo ezenza umtsalane ngaphakathi nakwindawo engqqunge iRustenberg, igcwele indalo kunye nezilwanyana onokutyelela uzibone. Iidwendwe zingabona iintlobo eziyi 13 ze antelope (uhlobo lwesilwanyana olubume bebhokhwe) kuquka i-Oribi, Kudu kunye ne Sable Antelope kunye neentlobo ezininzi zentaka ezahlukileyo eRustenburg Nature Reserve. Ikhona indawo intaba iKgaswane kwakulom-mandla, indawo elunge kakhulu ukwenzela ipikinikhi kunye nokonyuka intaba nendlela zokuthi uziqhubele kuzo kwindlela ezine tha (tar) nendawo onokuzibona. Indawo ze pikiniki zinendawo yokoja inyama.
Indawo iLost City ityebile kwaye imbeje-beje, yenziwe kakuhle kakhulu kwaye iphakathi wegadi ezintle ezifuku-fuku namahlathi. Eli bhotwe lihle lidityaniswe nendawo enemidlalo yamanzi, indawo iValley of the Waves ne Volcanic Bridge of Time. Indawo iSun City inemidlalo emininzi eyonwabisayo yangaphandle kunye nokuqhuba ubuka izilwanyana kwindawo iPilanesberg Game Reserve and National Park.
I-Pilanesberg yipaki yesine yezilwanyana ubukhulu kweli lo Mzantsi Afrika inezilwanyana ezingama 10 000 ezinikeza umdla kuquka izilwanyana ezintlanu ezinkulu zeli lo Mzantsi Afrika. lendawo yezilwanyana yathi yathwaxwa yinyikima mhlaba ene alkaline eyathi yatshabalalisa konke iminyaka ezizigidi ezingama 1200 million – enye yezintathu elizweni.
Indawo Ezinomtsalane Ezikufuphi eRustenburg, eMzantsi Afrika
Ingqongwe yintaba iMagaliesberg Mountain Range, iHartebeespoort Dam zonke zindawo zeholide ezinikeza imidlalo eyahlukileyo yokuzilolonga, imidlalo yasemanzini, kunye nemidlalo emnandi eyonwabisayo. Ezinye indawo ezithandwayo ziquka i-aquarium, indawo yezilwanyana yabucala, indawo yenyoka kunye nenqwelo yokonyukela phezulu.
I-Magaliesburg Village yindawo enembali kunye nendawo engqongileyo enemifanekiso emihle kunye nemithi yakudala, iintili nemilambo. Ezinye zezakhiwo ezinamaphahla aluhlaza ngombala zezeminyaka yo 1800. Iindwendwe zizakufumana indawo zokuhlala eziphakathi kwamahlathi, iivenkile, ezenkcubeko kunye nobugcisa nokusebenza efama. Kulendawo kukho iBlaaubank imayini yakudala ye Golide, enye yezindala kodwa isasebenza.
Indawo engqunge iSun City Resort yi “ Vegas” yase Mzantsi Afrika, lendawo yokutyelela inendawo zolonwabo lomntu wonke. I-Sun City inendawo ezintle ezininzi zobugcisa kunye nezemidlalo, kunye nendawo yokubamba imidlalo yeqonga. Iindwendwe zingakhetha kuthotho lendawo zokutyela nezo unokuthi uthenge ukutya uhambe nako okanye ufumane intlahla ecasino. Xa ufuna ukuzula-zula kulendawo yokutyelela ungasebenzisa iSky Train lo loliwe uma kwindawo ezohlukileyo kwisakhiwo sase Sun City.
Iindawo Ezinomtsalane eRustenburg
I-Waterfall Shopping mall ne Ndawo Onokubuka kuyo iRustenburg Rumble
I-Rustenburg Museum ekwi Holo lendawo
Izakhiwo zakudala, iicawe, iindawo zesikhumbuzo kunye nezindlu.
Indawo ezingamadlelo endalo- Rustenberg, Kgaswane, Vaalkop, kunye ne Borakalalo
Indawo Ezinomtsalane kwi Dami lase Hartebeespoort
Maropeng, Cradle of Human Kind, Indawo enezakhiwo zenkcubeko
Ilali yesintu iLesedi
Imiqolomba yase Sterkfontein
Indawo iDe Wildt yehlosi nendawo yezilwanyana zase Ndle
Indawo yemi Khombe kunye Nengonyama
Indawo yenyoka nezinye izilwanyana
Iindawo yama hashe
Indawo ethengisa ukutya, ikofu neziselo ezibutywala
Indawo yokuzenza mhle yangaphandle, neyalemihla
Indawo ethengisayo IWelwitschia
Isiselo esimfaxangiweyo esenziwe nge citrus, kunye nokungcamla utywala
Uhambo nokungcamla isonka samasi, ukuya kwivenkile ezithengisa ukutya ne pikiniki
Imizobo kunye nevenkile misebenzi yesintu yezandla
Ukunyuka ngesithuthi (cableway)
Indawo Ezinomtsalane eMagaliesberg
Ukuhamba ngebhasi ubuka indawo nokonwabela impatho ntle yasemaphandleni
Uhambo lokubuka iBlaaubank eyimayini yakudala ye Golide
Amahashe kunye nokonyuka intaba nge bhayisekile
Canopy, Zip Lines, abseiling
Ibhayisekile enkulu kunye ne paintball-Hekpoort Valley
Indawo Ezinomtsalane eSun City nase Lost City
Iindawo ezimangalisayo zemidlalo yenkcubeko nezemidlalo kuluntu lonke
Amabala amabini anemingxuma eyi 18 egolufa kunye ne Gary Player Country Club
Indawo zokusela iziselo kuquka utywala, indawo yokutya, indawo apho ungathenga ukutya uhlale uzityele (inkundla yokutyela), ivenkile ezithengisa ikofu, ivenkile ethengisa okuncane.
Indawo yolonwabo, imiboniso bhanya bhanya,ukungcakaza, ukuthenga iimpahla, indawo enemiboniso yenkcubeko
Ulonwabo lwangaphandle, zipslide, ibhayisekile enkulu, ukukhwela amahashe nokuninzi
I-Pilanesberg Game Reserve- ukuqhuba ubuke izilwanyana, ukuthabatha uhambo, quads, nendawo yengonyama